Kismaayo News » Baarlamaanka fursadda u harsan!
Baarlamaanka fursadda u harsan!
Kn: Shaki kuma jiro inay jiraan fursado badan oo dalka iyo dadkaba lagu badbaadin karay oo soo maray guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaanna Xildhibaanada Baarlamaanka.
Soomaalidu waxay tiraah “meyd waxaa u danbeeyay kaa la sii wado”, shabaqyada, dibindaabyada iyo lagdinta inagu dhacaysay walina la inagu wado waxaa u danbeeyay shirka laga shintirinayo ee London.
Waxaa cad in Baarlamaanka laga tashaday oo dhamaan shirarkii ka dhacay Garoowe ay sixiixeyaal ka ahaayeen Shariif Sh. Aadan oo xilkii ay ka xayuubiyeen, kan Ingiriiska ka dhacayana uu asagu yeelanayo sixiixa wareejinta inta magac ahaan inoogu hartay. Sababtaasi inteeda badan waxaa lahaa Baarlamaanka, waayo waxay si aan ka fiirsasho lahayn u sixiixeen heshiiskii Kampala, oo ayaguna gacantooday isku gowraceen, Soomaaliyana god bay ku sii riddeen.
Shaki kuma jiro in talaabadii ay Baarlamaanku ku casileen Shariif Sh. Aadan ay ku keentay geedi socodkii Road Map-ka khal-khal, laakiin ma noqon talaabo hor istaagta damacii loo yagleeyay qorsha Road Map-ka oo ahaa in Soomaaliya la galiyo xiliga dhaw xukun gacan shisheeye, mustaqbalkana la kala gaybsado.
Hadaba KismaayoNews oo indhaha galeyrka ku fiirinaysay fursada haray ayaa markani u aragta in Baarlamaanku talaabada kaliya ee ay qaadi karaan xiligani ay tahay inay cod aqlabiyad ah ku casilaan madaxweynaha DKMG, Sh. Shariif Sh. Axmed iyo dawladda Dr. Cabdiwali ka hor 23-bishan, inta uu san dhicin shirka London, si markaasi aynu ugu doodno inuusan markaasi ansax ahayn meherka uu Ingiriisku inala damacsanyahay.
Waxay taagantahay maalintii sharafta ama sharaf dhaca, maalintii dhaxalka ama dhaxal wareegga, waxa aad ka baqdaani waa xarig ama dil, labadaasna laba gooraba waa idiin meel ool, shilin danbe ood meesha isagu sii dhajisaanna ma jiro oo marleyba waa la idin kala dirayaa. Hadaba suurogal ma tahay inaad mar kale beesha caalamka biyaha ka calwisaan? Ileen neef gowracani geedo kama waabtee!
Ma jirto sifo ay Soomaalidu xiligani ku aamini karto Ingiriiska, waayo taariikhda ina soo dhex martay ma xusayso hal saac ama hal maalin oo Ingiriis asxaan u falay Soomaaliya, bal iskaba daaye 21-kii sano ee kala orodka iyo kala haadka wuxuu ku lahaa dhibaatooyinkii ina soo gaaray qayb weyn. Orodkiisu kama badna xiligani oohin yaxaas iyo in uu booska ka riixo Turkiga masaakiinteena quudinaya.
Maadaama xiligani ayna shacabka Soomaaliyeed gacanta wax ugu jirin, waxaa Baarlamaanka la gudboon in maalmaha u haray inta ayna dhamaan ay ugu yaraan kala diraan DKMG, oo gudoomiyihii cusbaa ee ay doorteen uu xilka madaxweyninimada si ku meel gaar ah u sii hayo inta dawlad kale laga dhisayo isla markaan ay qashinka ku daraan dhamaanba heshiisyada ay galeen dawladda Sheekh Shariif.